China ibhokisi yokudibana kombane kunye noMenzi wokubumba kunye noMthengisi | Mestech
Iibhokisi zokudibana kombanezisetyenziswa ngokubanzi ukuhambisa kunye nokuhambisa amandla nonxibelelwano. Iindawo eziphambili zeqokobhe lebhokisi yokuhlangana kunye nesimbozo ikakhulu zeplastiki eziveliswa ngenaliti xa sisakhula.
Iibhokisi zeziphambuka zombane zisetyenziswa ngokubanzi ukuhambisa kunye nokuhambisa amandla nonxibelelwano. Iindawo eziphambili zeqokobhe lebhokisi yokuhlangana kunye nesimbozo ikakhulu zeplastiki eziveliswa ngenaliti xa sisakhula. Ibhokisi yesixokelelwano kufuneka ithobele umgangatho oqinileyo wokusebenza kombane, ke siza kwazisa ngebhokisi yombane yombane kunye nokubumba apha.
Yintoni ibhokisi yeplastiki?
Ibhokisi yokuhlangana yombane ikwabizwa ngokuba yibhokisi yokuqhagamshela, ibhokisi yesiphelo, isixhobo sokudibanisa umbane, isiseko sesiphelo.
Ibhokisi yokuhlangana yombane yindawo evaliweyo yokudibanisa umbane, ukukhusela uqhagamshelo kunye nokubonelela ngomqobo wokhuseleko.
Ibhokisi encinci yesinyithi okanye iplastikhi yebhokisi enokudibana inokuba yinxalenye yomjelo wombane okanye inkqubo yentambo ye-thermoplastic-sheathed (TPS) kwisakhiwo.
Ukuba yenzelwe ukunyusa umphezulu, isetyenziswa ikakhulu iisilingi, phantsi kwemigangatho okanye efihliweyo emva kwepaneli yokungena- ngakumbi kwizakhiwo zasekhaya okanye zorhwebo. Uhlobo olufanelekileyo (njengolo luboniswe ngasekhohlo) lungangcwatywa kudonga lodonga (nangona ukufihla ngokupheleleyo kungasavunyelwa ziikhowudi kunye nemigangatho yale mihla) okanye kufakwe kwikhonkrithi - kubonakale ikhava kuphela.
Iibhokisi zombane zeplastikhi zinee-pluses kunye nee-minus zazo. Ngenxa yokuba zenziwe ngeplastiki, akukho sidingo sokuncamathisela ucingo olusezantsi kuyo. Kuba yenziwe ngezinto ezingahambisiyo, iitshintshi kunye nevenkile azinakufutshane xa zichukumisa icala lebhokisi.
Iibhokisi zeplastiki zihlala ziza nemingxunya yokuthinta isincamathelisi ngokulula kokutshintshela kunye neivenkile. Ezi bhokisi ziza kwiqela elinye, iqela eliphindwe kabini, kunye noqwalaselo lweqela lemigulukudu.
Iindidi zebhokisi yohlangana yombane
Iibhokisi zeziphambuka zombane iintlobo zeentlobo ezahlukeneyo: uhlobo lwangaphakathi, uhlobo lwangaphandle, uhlobo lokuchasana kwamandla ombane, kunye nohlobo olungena manzi. Izixhobo kunye neemfuno zokhuseleko ziyahluka kwiindawo ezahlukeneyo kunye namazwe. Ke ngoko ukubumba kwenaliti kunye nokwenza inkqubo kukwahlukile.
1. ibhokisi yokudibana yombane ngaphakathi.
Iintlobo nentlaka: ABS, PVC
Uninzi lwezi ziofisi kunye neebhokisi zeewiring ekhaya. Zisetyenziselwa ukuhanjiswa kwamandla ngaphakathi kunye nolawulo lwendawo enye, kunye nokucima umbane, kunye nokunxibelelana komgca wonxibelelwano kunye nolawulo. Umbane osebenzayo ngokubanzi ungaphantsi kwe-250 volts. I-resin yeplastiki iyacelwa ukuba ithobele ibakala le-flame retardant UL94 V1 ~ V0.
2. ibhokisi yokudibana yombane yangaphandle.
Iintlobo zentlaka: ABS, ABS / PC
Ibhokisi yokuhlangana yangaphandle iyafuneka ukuze ikwazi ukumelana neqondo lobushushu eliphezulu neliphantsi kunye nokufuma kwemvula kunye nokukhanya kwelanga okuguga, ulwakhiwo lwemveliso engenamanzi, ukuguga kwemitha yokulwa imitha yelanga, ukuziqhelanisa nobushushu obuphezulu nobuphantsi. Kuyimfuneko ukusebenzisa iiplastikhi ezikumgangatho ophezulu, ezinje nge-PC okanye i-nylon, kunye nezongezo ezizodwa ezinokumelana ne-ultraviolet kunye nokusebenza okuphezulu kunye nobushushu obuphantsi.
3. Ibhokisi yesixokelelwano somzi mveliso.
Iintlobo nentlaka: ABS, ABS / PC, nenayiloni
Ibhokisi yesixokelelwano semizi mveliso, ihlala ineemfuno zomsebenzi ezizodwa, ezinje ngokuchaneka komlinganiso kunye nozinzo, ioyile kunye nealkali ukumelana, nxiba ukumelana. Izinto zeplastiki kufuneka zikhethelwe iimfuno ezahlukeneyo kunye nokuchaneka komngundo kufuneka kumiselwe.
4. ibhokisi yombane yokuhlangana ombane ophezulu.
Ibhokisi yejunction isetyenziselwa ikakhulu amandla ombane aphezulu, afana nekhabhathi zombane, iibhokisi zolawulo zombane, izixhobo zokuhambisa. Ukufakwa kakuhle kunye neepropathi ezichasene nokwaluphala ziyafuneka. Inayiloni kunye nezinye iiplastiki zobunjineli zikhethwe ngokubanzi.
5. Umsebenzi ophambili webhokisi yokuhlangana kwemodyuli ye-photovoltaic kukudibanisa nokukhusela imodyuli ye-photovoltaic yelanga, uqhuba okwangoku okwenziwe yimodyuli ye-photovoltaic. Njengecandelo elibalulekileyo lemodyuli yeseli yelanga, ibhokisi yokudibanisa yemodyuli ye-photovoltaic yimveliso ebanzi edibanisa uyilo lombane, uyilo loomatshini kunye nokusetyenziswa kwezinto. Inika abasebenzisi ngesikimu sokudibanisa esidibeneyo semodyuli ye-photovoltaic yelanga.
6. Ibhokisi yejunction engenamanzi.
Iintlobo zentlaka: ABS, ABS / PC, PPO
Kukho imigangatho emibini yokungena kwamanzi.
A. Ukutshiza kwangaphandle okufutshane, okt amanzi awayi kugalelwa ngqo kwimveliso.
B. Imveliso ifakwa emanzini.
Iimfuno manzi ikakhulu kuxhomekeke kubume beengxenye zeplastiki, ezifana:
Bethela umsesane wokutywina kumdibaniso okanye ekuvuleni;
Ultrasound ukuwelda amalungu amabini:
Integral ziphene yokubumba.
Ibhokisi kuhlangana manzi
Ibhokisi yeplastiki yangaphandle
Ibhokisi yokudibanisa yokukhanyisa ngaphakathi
Tee ibhokisi yeplastikhi yebhokisi
Ukusetyenziswa kwesiqhelo ibhokisi yokudibanisa
Ibhokisi yeplastikhi yeNylon
Iimfuneko zokusetyenziswa kweebhokisi zeendibano zombane
Iibhokisi zeziphambuka zombane zihambelana kakhulu nombane kwaye kufuneka zithobele imigangatho efanelekileyo yokhuseleko okanye iimfuno, ikakhulu:
1. Ukuxhathisa kwemozulu: ukumelana namaqondo obushushu aphezulu naphantsi, ukufuma
2. Ukufakwa kombane
3.Ukuchasana namandla ombane aphezulu, ilahleko ye-dielectric rhoqo kunye nelahleko ye-dielectric: Ingasebenza kumbane ombane ophezulu okanye ophantsi, ophakathi kunye nophakamileyo kwibala lombane.
4. Ukutshatyalaliswa kobushushu: ubushushu obuveliswa ngamalungu angaphakathi anokukhutshwa ngokukhawuleza.
5. Ukudodobalisa ilangatye: Akululanga ukutsha ube ngumlilo.
6. Imitha ye-anti-ultraviolet: Xa ibhokisi yokudibana yombane ikukukhanya okuqinileyo okanye indawo engaphandle, ayizukuguga kunye nokusilela ngenxa yemitha yelanga.
7. Ukuxhathisa umhlwa: Kwi-asidi, ialkali kunye netyuwa, ayizukubonakalisa kwaye yonakalise, kwaye inokusebenza ixesha elide.
8. Ukutywina kunye nokungena manzi: ukukwazi ukusebenza kwindawo emanzi okanye emanzini
9. Ukhuselo lokusingqongileyo: Qinisekisa ukuba izinto ezisetyenzisiweyo ziyakukhupha izinto eziyityhefu okanye zitshaye xa zitshisiwe okanye zitshisiwe, nto leyo eya kuthi yonakalise impilo yabantu.
Ukuqwalaselwa koyilo lweBhokisi yoQhagamshelo loMbane
1. Ukukhethwa kwezinto: Okwangoku, eyona mimandla yesicelo semveliso yebhokisi ye-junction engenamanzi yindawo yokwakha engqwabalala kunye nendawo evulekileyo. Ukuchasana nefuthe, amandla emithwalo emileyo, ipropathi yokugquma, * ukungabinetyhefu, * ukuxhathisa ukwaluphala, ukumelana nokubola kunye nokudodobala kwelangatye kwezinto kufuneka ziqwalaselwe xa kuthathelwa ingqalelo ukusebenza kukhuseleko lweemveliso. (Ukusebenza okungekho yityhefu kuye kwachaphazeleka ngokubanzi, ngakumbi ukuba iimveliso zebhokisi yokudibanisa engangeni manzi kwimeko yomlilo, ukutshisa ngekhe kukhulule iigesi eziyityhefu eziyingozi, zihlala zisiba kwimeko yomlilo ngenxa yokuphefumla inani elikhulu leegesi eziyityhefu. ukufa kuye kwaba sisininzi.
2. Uyilo lolwakhiwo: Ingqwalaselo kufuneka inikwe ukomelela okupheleleyo, ubuhle, ukuqhubekeka ngokulula, ukufakwa ngokulula kunye nokurisayikilisha kweebhokisi zeziphambuka ezingangeni manzi. Okwangoku, iimveliso zebhokisi yokuhlangana engangeni manzi eveliswa ngabenzi abaziintloko bamazwe aphesheya azinazo naziphi na izinto zesinyithi, ezinokwenza lula inkqubo yokubuyisa imveliso. Nangona kunjalo, izinto ezisetyenziswa ngabenzi abaninzi basekhaya zahlukile, kwaye iipropathi ezichasene ne-wax zezixhobo zihlwempuzekile. Ngokubanzi, ukufakwa kobhedu kufakelwe kwisokethi yokufaka ibhokisi yokudibanisa engenawo amanzi ukwandisa ukomelela kofakelo, oluya konyusa ixesha kunye neendleko zenkqubo yokubuyisa izinto. Iingxaki ezinjalo zinokusombululwa ngokukhetha izinto ezingavuthiweyo ezinezalathi zentsebenzo eziphezulu ezibonelelwa ngabavelisi abaqhelekileyo.
3.Ukujiya kodonga: Ngokubanzi, xa kuthathelwa ingqalelo indleko iyonke yemveliso, ubukhulu bendonga yemveliso kufuneka bucuthwe kangangoko ukuze kuhlangatyezwane nefuthe kunye nokuchasana nemveliso. Kuyilo lweebhokisi zeendawo zokudibanisa amanzi ezingamanzi, udonga lobunzima be-ABS kunye nezinto zePC ngokubanzi ziphakathi kwe-2.5 kunye ne-3.5 mm, iglasi yefayibha eqinisiweyo ipholiyesta iphakathi kwe-5 kunye ne-6.5 mm, kwaye ubukhulu bodonga lwezinto zealuminiyam ezifa ngokubanzi ziphakathi 5 kunye no-6.5 mm. Kuphakathi ko-2,5 no-6. Ubungakanani bodonga lwezinto kufuneka luyilelwe ukuhlangabezana neemfuno zofakelo lwezinto ezininzi kunye nezixhobo.
4.Ukutywinwa kokukhethwa kwempahla yokukhonkxa: Iimveliso zebhokisi ye-junction engenawo amanzi, izixhobo ezisetyenziselwa ukutywinwa kweeringi zi: PUR, EPDM, Neoprene, Silicon. Uluhlu lobushushu, ukumelana koxinzelelo, ukwanda komyinge, ubulukhuni, ukuxinana, umlinganiselo wokucinezelwa kunye nokumelana neekhemikhali kufuneka kuthathelwe ingqalelo xa ukhetha isangqa setywina.
5.Isixhobo sokuqhagamshela esingamanzi esinganyangekiyo esingumanzi: Xa ibhokisi yokuhlangana engangeni manzi kunye nesiseko zidityanisiwe, icandelo eliphambili yibholiti. Ukukhethwa kwezinto ze-bolt kubaluleke kakhulu. Izinto ezisetyenziswa ngokuqhelekileyo yi-PA (nylon) okanye i-PA alloy, kunye ne-stainless steel tapping screw ingasetyenziswa. Amandla olwakhiwo kufuneka athathelwe ingqalelo kuyilo lwe-screw ephezulu. Ngenxa yokuba abasebenzisi abahlukeneyo basebenzisa iindlela ezahlukeneyo kwaye bahlangabezana neemfuno ezahlukeneyo, ezinje ngokufakwa kwescrewdriver sombane kunye nofakelo lwencwadi, amandla e-torque e-screw kufuneka athathelwe ingqalelo kuyilo.
Ibhokisi kuhlangana Electrical nokuvunda kunye nokubumba
Iindawo eziphambili zebhokisi yokudibanisa yindawo yokuhlala yeplastiki kunye nesembozo. Zenziwe ngendlela yenaliti yeplastiki. Isixhobo sokubumba ngenaliti.
Uyilo lwe-junction ibhokisi yenaliti yokubumba luxhomekeke kuyilo loyilo kunye nemveliso yebhokisi yesiphambuka, emisela uyilo loyilo lobunjani kunye nolwakhiwo lomngxunya.
Isinyithi kunye nobulukhuni bokufakwa kwesikhunta kuxhomekeke kwi-resin charteror yeplastikhi, ubume bemveliso kunye nobomi ekujoliswe kubo. I-P20 yentsimbi ihlala isetyenziswa njengezinto zokubumba zokufaka iiodolo eziqhelekileyo, kunye ne-S136 isetyenziselwa umphezulu womhlaba. Kwiodolo enkulu yeemveliso, imingxunya emininzi yokubumba iyafuneka ukonyusa amandla emveliso.
Junction ibhokisi zeplastiki ngenaliti ngumngundo
IMestech iqokelele amava atyebileyo okwenza ukungunda kunye nokuveliswa kwenaliti kwiibhokisi zeziphambuka kubathengi abaninzi. Ukuba unemfuno yeplastiki kwibhokisi yejunction, nceda unxibelelane nathi.
Egqithileyo Iindawo zeplastiki zokucoca amanzi
Okulandelayo: Iiplastiki zeplastiki zentambo kunye nocingo
Ifowuni yevidiyo yeplastiki ebiyelweyo
Iindawo zeplastiki zokucoca amanzi